Ukuphupha ngesaber Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iphupha malunga nesaber
Ukuphupha ngesaber. Yonke imiba kunye neempawu zamaphupha kunokuba luncedo ukwazi ukuba ungazitolika njani, funda ukuba kwesi sikhokelo.
I-saber sisixhobo esisika ngokulula kunye nokuhlaba, kwaye yayiyinxalenye yezixhobo zomkhosi eYurophu ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX. Isixhobo sibukhali kwelinye icala kwaye sinokubangela ukonzakala okukhulu ngenxa yokugoba okuqhelekileyo. Namhlanje, ikrele elifanayo lisasetyenziselwa ukubiyela ezemidlalo. Ukongeza, ii-sabers zihlala zifunwa emva komqokeleli wezinto.
Iphupha malunga nesaber linokoyikisa okanye linike umdla, kuxhomekeke ekubeni umntu ophuphayo uziva esongelwa okanye ujonga isixhobo kuphela. Mhlawumbi uyabuthanda ubugcisa nokusika ikhaba. Ukuba umphuphi uphethe i-saber ngesandla sakhe, unokufuna ukuzikhusela. Unxibelelwano olululo lwephupha ke ngoko lubalulekile ekutolikeni kwephupha.
1 Uphawu lwephupha «saber» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «saber» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «saber» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «saber» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha "saber" licela umphuphi ukuba khusela. Kuya kufuneka ulwe izityholo zobuxoki okanye ukuphathwa ngokungenabulungisa ebomini bokwenyani. Isimboli yamaphupha inokuqala ukwenza ukuba umphuphi ayazi imeko.
Iphupha likhuthaza ukuzingisa ukufezekisa injongo oyifunayo. Ukulwa nesaber kukubonisa ubukhalipha kunye nendlela enamandla yokuchazwa kwamaphupha. Umphuphi uya kulwa ngendlela yakhe.
Nangona kunjalo, ukuba ubetha ngokungaboniyo abanye ngesixhobo ephupheni, uphawu lwephupha luphawu ngakumbi lweemeko zoxinzelelo. Kwakhona ukusebenzisa isaber kunokuthetha Ubundlongondlongo. Uphawu lwephupha luyenza icace kuye ukuba angamcaphukisa umdlali welinye iqela ongekhoyo kulo msebenzi.
Ukuba iphupha liyasongelwa okanye lenzakaliswe yi-saber, uphawu lwephupha lubhengeza amaxhala ngokwentetho edumileyo yamaphupha. Kwangelo xesha, iphupha elo libonisa ukuba kunokwenzeka ukoyisa iimeko ezimbi okanye abantu abanobutshaba.
Ukuba umphuphi uthandana nobomi bokwenyani, ngokokutolikwa kwephupha kubonwa njengophawu lwe isithembiso sothando. Ukuba umntu ophuphayo uzenzakalisa ngompu ephupheni, unoxanduva lokugula kothando naye aya kusokola.
Ukuba i-blade ye-saber ibukhali, ekuchazeni iphupha oku kuxela inzuzo okanye mpu melelo yeprojekthi. Ukuba kubonakala kuyindinisa, umphuphi usebenza nzima ngento ethile. Isaber eyaphukileyo ilumkisa njengophawu lokusilela kwaye ibuza abo baphuphayo ukuba bangalandeli isicwangciso.
Uphawu lwephupha «saber» - ukutolikwa kwengqondo
Isaber sisixhobo esisetyenziswa kumlo onokungena emzimbeni. Kule meko, uphawu lwephupha "saber" lufumaneka kutoliko lwengqondo ngephupha njengembonakalo ye isini oyindoda.
Kwimeko nganye, kuxhomekeke ekubeni ukuphupha yindoda okanye ngumfazi, kananjalo nendlela oziva ngayo malunga nokwabelana ngesondo kwakho. Iphupha linokubonisa zombini uloyiko lokungena kunye nomnqweno walo.
Kwabaphuphi abancinci, uphawu lwephupha luhlala lubonisa isidingo sokwenza izinto ezithandekayo. Ngomqondo obanzi, nangona kunjalo, i-saber nayo imele isenzo sobundlongondlongo. Umphuphi engazi engazi nto kubomi bakhe, obunokutshintsha kuphela ngendlela encinci. I-subconscious iyayihlawulela le mvakalelo yokungabikho koncedo ngophawu lwephupha, ngengqondo yokuba yonke into inokususwa endleleni ngekrele ephupheni.
Uphawu lwephupha «saber» - ukutolika kokomoya
Njengaso nasiphi na isixhobo, i-saber inokusetyenziselwa uhlaselo kunye nokuzikhusela. Ukuyiphatha kufuna inqanaba eliphezulu loxanduva.
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha lumele amandla engqondo ukuba abaphuphi mabasebenzise ngengqiqo nangononophelo.
Iphupha malunga neSaber Tooth Tiger